Football Khabar » राकुटेन कपमा आज बार्सिलोना र भिसेल कोबे भिड्दै : कसले मार्ला बाजी ?
राकुटेन कपमा आज बार्सिलोना र भिसेल कोबे भिड्दै : कसले मार्ला बाजी ?
प्रि–सिजनअन्तर्गत जापानमा जारी राकुटेन कपमा आज एक महत्त्वपूर्ण खेल हुन गइरहेको छ । प्रतियोगिताको दोस्रो खेलमा स्पेनिस क्लब बार्सिलोना र जापानी क्लब भिसेल कोबे भिड्दैछन् ।
बार्सिलोनाले यसअघि पहिलो खेल इंग्लिस क्लब चेल्सीसँग खेलिसकेको छ । सो खेलमा बार्सिलोना २–१ ले पराजित भएको थियो । त्यसपछि उसले जापानी क्लबसँग खेल्न लागेको हो ।
भिसेल कोबे त्यही क्लब हो, जहाँबाट बार्सिलोनाका पूर्वखेलाडी तथा पूर्वकप्तान आन्द्रेस इनिएस्टा खेल्छन् । उनीसँगै बार्सिलोनाका अन्य पूर्वखेलाडी पनि सो क्लबमा छन् । यसर्थ पनि आज बार्सिलोनाका लागि यो खेल अर्थपूर्ण हुनेछ ।
बार्सिलोना जापानमा आफ्ना प्रमुख खेलाडी लिओनल मेस्सी र लुइस स्वारेजबिनै छ । तर, टोलीमा नयाँ खेलाडी एन्टोनी ग्रीजम्यान र फ्रेन्की डे जोङलगायत छन् । बार्सिलोना आज चेल्सीसँग भोगेको हारको पीडा कोबेलाई हराएर भुल्ने दाउमा छ ।
कोबे जापानको शीर्ष लिग जे वान लिग खेलिरहेको टोली हो । ऊसँग निकै अनुभवी र राम्रा खेलाडी रहेकाले बार्सिलोनाविरुद्ध ऊ सुखद् नतिजा निकाल्ने दाउमा छ । अघिल्लो खेलमा हारेको बार्सिलोनालाई ऊ अर्को हार चखाउन तयार छ ।
खेलअघि बार्सिलोनाका प्रशिक्षक अर्नेस्टो भाल्भर्डेले कोबेसँगको खेल एक सद्भावपूर्ण र रोमाञ्चक खेल हुने बताएका छन् । खेल नेपाली समयअनुसार आज दिउँसो २ः४५ बजेबाट जापानको मिसाकी पार्क स्टेडियममा सुरु हुनेछ ।
प्रकाशित मिति ११ श्रावण २०७६, शनिबार ०४:५७
ग्रानाडामाथि नाटकीय कमब्याक जित निकाल्दै बार्सिलोना सेमिफाइनलमा